Umncintiswano wabadali beCAM Comic | Izincwadi Zamanje
Umncintiswano wabadali beCAM Comic
Izindaba ezimnandi ngaye incwadi yamahlaya umhlaba, kusukela Ibhokisi leMedithera isekela umsebenzi wabadali abancane abavela kubo Ezomphakathi. Phakathi kwemizamo abayiphakamisayo kukhona Imincintiswano ka-CREACAM. Kuhlelo lwayo lokuqala, ikholi ligxile emkhakheni wamahlaya, izisekelo zawo ezilandelayo:
Izizwe ezisencane noma abantu bakwamanye amazwe, abaneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala futhi abangaphezu kweminyaka engama-35 ngoDisemba 2007, bangacela ukubamba iqhaza kulo mncintiswano, bebodwa noma emaqenjini (abantu ababili noma abathathu).
Umbambiqhaza ngamunye angaletha ubuningi bemisebenzi emithathu (ngawodwana noma ngokuhlanganyela).
Izigaba ezintathu ze-thematic zisethwe emncintiswaneni:
- UKUHLANGANISA (Ukuthuthela Kwelinye Izwe, Ukuvinjelwa Kokuhlukunyezwa Ngokobulili. Ukuhlanganiswa Komphakathi Wamaqembu Ezimweni Zokuba Sengozini Ekhethekile.)
- IMVELO (Amandla angamanye nokonga amandla. Ukuguquka kwesimo sezulu. Amanzi. Ukuhlukahluka kwezinto eziphilayo.)
- ISIKO (Interculturality. Innovation and avant-garde. Mediterranean and Ibero-American heritage and artistic).
Amasu nokuklanywa kwamahlaya kuzoba mahhala. Ifomethi yomsebenzi kufanele ibe ngu-A4 noma u-A3. Umsebenzi kumele wethulwe ubhalwe ngeSpanishi, ubhalwe ilebula ngaphansi kwesiqubulo noma mbumbulu namakhasi abhalwe izinombolo, enobude obuncane bamakhasi ayi-8 kanye nobukhulu bamakhasi ayi-12.
Abalingiswa abakhulu kumele babe ngabokuqala, bendalo yabo futhi bangashicilelwa.
Imisebenzi kumele ingashicilelwa futhi ayikaze inikezwe komunye umncintiswano; hhayi kuphela ngosuku lokungeniswa kwabo emncintiswaneni, kodwa futhi nangesikhathi sokumenyezelwa kwesinqumo.
Isikhathi esinqunyiwe sokwamukelwa kwemisebenzi sizoqala ngoMashi 1 kuya ku-15, 2008. Ngemuva kwalolo suku, kuphela lezo zinto zeposi ezinezimpawu zomsebenzi ezikhomba ukuthi zithunyelwe phakathi nalesi sikhathi ezizongeniswa kulo mncintiswano.
Kumele zithunyelwe kuphela ngeposi eliqinisekisiwe ku:
Ngimncintiswano wabadali bamahlaya
I-PO Box 501
Umsebenzi uzokwethulwa ubhalwe ngaphansi kwesiqubulo noma igama elingumbombayi ukugcina ubunikazi bombhali, okuhambisana nebhondi noma imvilophu evaliwe, ngaphakathi lapho ifomu lokubamba iqhaza kufanele ligcwaliswe ngokufanele. Lokhu kungatholakala ku-www.obrasocial.cam.es
Imisebenzi izokwethulwa ephepheni naku-CD ku-JPG / JPEG noma ngefomethi ephezulu ye-PDF.
Imiklomelo lo mncintiswano onikezwe ngayo yile elandelayo yesigaba ngasinye kwezintathu (ubumbano, imvelo namasiko):
Umklomelo wokuqala: ama-euro angama-6.000
Umklomelo wesibili ama-euro angama-3.000
Umklomelo wesithathu: 1.500 euros
Umklomelo wesibili ofinyelela kuma-euro angama-500 lilinye
Akekho umbhali ongazuza emiklomelweni engaphezu kweyodwa noma kumklomelo wesibili. Imiklomelo izokhokhwa ivuna lowo obhalisile, futhi izoncika kulokho okunqunywa yimithethonqubo yentela yamanje.
ICaja de Ahorros del Mediterráneo inelungelo lokusebenzisa noma yimuphi umsebenzi owina imiklomelo noma ingxenye yawo, ngokuya ngentshisekelo yayo nokungenzi nzuzo, ihlale icaphuna umbhali, ikwazi ukuyishicilela kanye / noma ukuyihlela ngendlela yencwadi , IDVD, iWebhu noma okufanayo, njengokwenza imibukiso yokuhamba.
Ijaji elenziwe ngabantu abadumile emhlabeni wamahlaya lizokhetha leyo misebenzi eliyibona ifanelekile ukuba yingxenye yezigaba ezahlukahlukene. Uma ngokombono wejaji, imisebenzi eyamukelwe ingahlangabezani nekhwalithi eyanele, eminye yemiklomelo ingamenyezelwa njengeyize.
Isinqumo esikhishwe yijaji esizoba ngowokugcina sizobekwa emphakathini ngenyanga ka-Ephreli 2008 kuwebhusayithi ethi www.obrasocial.cam.es
Abahlanganyeli bangacela ukubuyiswa komsebenzi wabo ohanjisiwe lapho isinqumo sejaji senziwe saziwa emphakathini.
Ngemuva kwezinyanga ezimbili kusuka osukwini lwesinqumo sejaji, imisebenzi efakwe emncintiswaneni futhi enganikelwanga ngeke ibuyiswe yinhlangano, futhi izicelo zokubuyiselwa ngeke zamukelwe.
Abahlanganyeli, ngenxa yokuba khona, bamukela ngokugcwele lezi zisekelo. Ngemininingwane engaphezulu, ungashayela ku-902 100 112, i-imeyili: obra-social@cam.es nakuwebhusayithi www.obrasocial.cam.es
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Umncintiswano wabadali beCAM Comic
I-AniMangaWeb ngokuqhathanisa namaBanzai Comics
Januwari Standard News